Famongorana faobe: karazana, vokany ary vanim-potoana | Meteorolojia tambajotra
Portillo Alemanina | 06/05/2022 10:00 | Ciencia
Ny planetantsika dia manana evolisiona maherin'ny 4.500 XNUMX tapitrisa taona. Nandritra izany fotoana izany dia nisy ny fiovana isan-karazany izay nahatonga ireo karazana maro ho lany tamingana. Ireo vanim-potoana ireo famongorana faobe Tsy zava-baovao amin'ny planeta tany izy ireo. Ireo singa ireo dia niafara tamin'ny saika ny karazana rehetra nisy tamin'izany fotoana izany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny famongorana faobe, ny toetrany ary ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny tantaran'ny planeta.
1 Inona no atao hoe famongorana faobe
2 Antony faharinganana faobe
2.1 antony biolojika
2.2 antony ara-tontolo iainana
2.3 antony extraterrestrial
2.4 antony nataon’olombelona
3 Famongorana faobe teo amin'ny tantaran'ny tany
3.1 Ordovician-Siluriana lany tamingana
3.3 Famongorana ny Permian-Triassic
3.5 Cretaceous - famongorana tertiary
3.6 Famongorana faobe amin'ny Holocene na famongorana faobe fahenina
Inona no atao hoe famongorana faobe
Voalohany indrindra, tokony ho fantatsika aloha fa lany tamingana ny karazana iray rehefa tsy misy santionany tavela na aiza na aiza eto amin'ny planeta afaka miteraka sy mamela taranaka. Ankehitriny, ny famongorana faobe dia iray amin'ireo karazana faharinganana telo misy. Andeha hojerentsika eto ny fiantsoana azy ireo sy ny mahasamihafa azy:
Famongorana ny lamosina: Miseho kisendrasendra amin'ny biome rehetra izy ireo ary manjavona tsikelikely.
Famongorana faobe: miteraka fihenam-bidy be ny isan'ny karazana monina amin'ny faritra ara-jeografika iray ary mitranga mandritra ny fe-potoana iray.
faharinganana faobe loza: Mipoitra avy hatrany eo amin'ny sehatra maneran-tany izy ireo, ary vokatr'izany dia mihena be ny zavamananaina amin'ny karazana.
Antony faharinganana faobe
Rehefa avy namaky ny fizarana teo aloha ianao dia mety hanontany tena hoe nahoana no mitranga ny famongorana faobe na inona no mahatonga ny faharinganan'ny karazana. Maro ny antony manjavona ireo karazana, saingy ireto ny sasany amin'izy ireo.
Eto izy ireo no miditra an-tsehatra ny toetra mampiavaka ny karazana sy ny mety ho endemim sy ny fifaninanana eo amin'izy ireo. Amin'izany fomba izany, ny karazam-biby sasany, indrindra fa ny karazam-biby manafika ao amin'ny faritaniny, dia afaka mamindra ny hafa ary mitarika azy ireo ho lany tamingana. Matetika ny fanjavonan'ny ambadika dia mitranga noho ireo karazana antony ireo.
antony ara-tontolo iainana
Ny antony ara-tontolo iainana dia ahitana: fiovan'ny maripana, fiovan'ny haavon'ny ranomasina, fiovan'ny tsingerin'ny biogeokimia, fihetsehan'ny takelaka, tectonics plate, Sns Amin'ity tranga ity, raha tsy afaka mampifanaraka amin'ny toe-piainana vaovao ny karazana, dia ho lany tamingana izy. Amin'ny lafiny iray, ny asan'ny volkano dia anisan'ny antony ara-tontolo iainana izay matetika mitarika ho amin'ny faharinganana faobe.
Tsy Mars na OVNI no tiana holazaina, fa ny fiantraikan'ny asterôida sy ny meteorita amin'ny ety ambonin'ny tany. Amin'ity tranga manokana ity, ny faharinganana dia nitranga nandritra sy taorian'ny fiantraikany, satria taorian'ny fiatraikany dia niteraka fiovana teo amin'ny firafitry ny atmosfera, ankoatra ny vokatra hafa. Noho ireo karazana antony ireo dia nitrangan'ny faharinganana faobe, tahaka ny inoana fa nitrangan'ny faharinganan'ny dinôzôra.
Ireo no antony izay vokatry ny fitondran-tenan'olombelona tanteraka. Ohatra, fambolena, harena ankibon'ny tany, fitrandrahana solika sy ala, fandotoana ny tontolo iainana, ny fampidirana karazam-biby hafakely, fihazana sy fanondranana bibidia ary ny fiakaran'ny maripanan'izao tontolo izao dia anisan'ny olana ara-tontolo iainana ampidirin'ny olombelona amin'ny tontolo iainana izay tsy isalasalana fa hitarika amin'ny faharinganan'ny karazana.
Famongorana faobe teo amin'ny tantaran'ny tany
Azonao sary an-tsaina ve hoe firy ny faharinganana faobe nitranga nandritra ny tantaran'ny Tany? Mazava ho azy fa dimy no lany tamingana. Na dia ny mpahay siansa maro aza no milaza fa efa lany tamingana fahenina isika. Amin'ity fizarana ity, dia holazainay aminao ny vanim-potoana ara-jeolojika, ny halavany ary ny antony nahatonga ny faharinganana faobe.
Ordovician-Siluriana lany tamingana
Ny faharinganana faobe voalohany dia nitranga tokony ho 444 tapitrisa taona lasa izay. Tombanana fa naharitra 500.000 1 ka hatramin’ny 60 tapitrisa taona izy io, ka maherin’ny XNUMX%-n’ny karazana no lany tamingana. Misy teoria maromaro momba ny antony nahatonga an'io lany tamingana io, ny mahery indrindra milaza fa ny fipoahana supernova dia niteraka fiovan'ny haavon'ny ranomasina sy ny sosona ozon.
Teo amin'ny 360 tapitrisa taona lasa izay no nitrangan'izany ary maherin'ny 70%-n'ny karazana no lany tamingana. Heverina fa nanomboka tamin'ny fipoahan'ny volom-borona, izay lalina ambanin'ny hoditry ny tany, izay niainga avy amin'ny faritra mafana sy ny fehikibo volkano, ilay hetsika famongorana, izay naharitra 3 tapitrisa taona.
Famongorana ny Permian-Triassic
Teo amin’ny 250 tapitrisa taona lasa teo ho eo no nitrangan’io fisehoan-javatra io ary naharitra iray tapitrisa taona. amin'ny fifandanjana, Nanjavona ny 95%-n’ny karazana an-dranomasina sy ny 70%-n’ny karazana an-tanety. Tsy fantatra ny tena antony, fa tombanana fa mety ho vokatry ny asan'ny volkano, ny entona mivoaka avy ao amin'ny ati-tany, ary ny fiantraikan'ny asteroid.
260 tapitrisa taona lasa izay, ity hetsika famongorana faobe naharitra tapitrisa taona ity dia namongotra ny 70%-n'ny karazana. Ny teoria manazava ny antony dia ahitana ny fisarahan'ny Pangea sy ny fipoahana volkano nifanesy.
Cretaceous - famongorana tertiary
Efa 66 tapitrisa taona lasa izay no nitrangan’izany ary angamba no hetsika fandripahana faobe malaza indrindra, satria lany tamingana ireo karazana dinôzôra nipetraka teto an-tany. Misy teoria maromaro hanazavana ny antony, ny ankamaroany dia mifototra amin'ny asan'ny volkano avo sy ny fiantraikan'ny asterôida lehibe. Ny mampiavaka an'ity hetsika ity dia tsy ny dinosaurs ihany no nahafaty azy, fa ho an'ny 70% mahery amin'ny karazana, ary naharitra 30 andro monja izany.
Famongorana faobe amin'ny Holocene na famongorana faobe fahenina
Niteraka resabe tokoa ity hetsika manokana ity, tsy noho ny mety hitranga eo no ho eo ihany, fa satria noforonina tsotra izao ny antony. Ny zava-misy dia mitombo ny tahan'ny faharinganan'ny karazana hatramin'ny fivoaran'ny asan'ny olombelona, Ohatra, ny biby mampinono dia mihalevona amin'ny tahan'ny avo 280 heny noho ny mahazatra. Fanampin'izany, tombanana fa ireo karazana efa lany tamingana tao anatin'ny roa taonjato (200 taona) dia tokony ho lany tamingana ao anatin'ny 28.000 XNUMX taona. Raha jerena izany dia vao mainka mazava kokoa fa miatrika famongorana faobe fahenina isika.
Mba hamenoana ny fahatakarantsika ireo famongorana faobe ireo teo amin'ny tantaran'ny Tany, dia nanome tetiandron'ny faharinganana faobe eto ambany izahay.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny famongorana faobe sy ny fiantraikany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Ciencia » famongorana faobe
Miverimberina ary tsy ho very ny transcendence tsy an-kijanona, mamela ny fanahintsika ho voamarika sy mientanentana foana, tadidio foana ny fitohizan'ity vaovao ity ary misaotra anareo namana.
inona no orbit